Mirrors Nepal » सम्भोगले बढाउँछ आयु, कसरी ? जान्नुहोस्
२२ पुष २०७४ |
सम्भोगले बढाउँछ आयु, कसरी ? जान्नुहोस्
२२ पुष २०७४, शनिबार १७:४४
सम्भोगलाई त्यति हल्का ढंगले पनि लिनु हुँदैन । सम्भोगअघि महिला–पुरुषले एक–अर्काको मनोविज्ञानलाई बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ । पुरुष जब तनावमा हुन्छ त्यतिवेला सम्भोगमा उत्रन चाहन्छ । ऊ सम्भोग गरी तनाव विसर्जनको प्रयास गर्छ । महिलामा भने यसको ठीक विपरीत मानसिकता हुन्छ । उनीहरू तनाव, चिन्तामा कहिल्यै पनि सम्भोगमा सहभागी हुन चाहँदैनन् । पुरुषलाई एकै समय